မြေးအဘိုး သရဲနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / မြေးအဘိုး သရဲနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Apann Pyay 2:28 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
"ဟရောင်… ငါတို့ မပြန်ပဲ… ဒီရွာမှာပဲ ညအိပ်ရင် ကောင်းမလား.."
"အာ.. မဖြစ်ဘူးကွ… မနက်ဖြန် … ကျောင်းတက်ရမှာ မင်းလည်း အသိကို.. ငါတို့ ဒီည မြို့ကို ပြန် ရောက်မှ ဖြစ်မှာ…"
"ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်.. ငါတို့ မြို့ထိပ်က သင်းချိုင်း အကြောင်းလည်း မင်းသိသားနဲ့. နေ၀င်ပီဆို ဘယ်သူမှတောင် ဖြတ်တော့တာ မဟုတ်ဘူး… ငါတို့ ဒီအချိန်သွားရင် သင်းချိုင်းကို ညလယ်ချိန်မှာ ဖြတ်ရမှာနော်…"
"ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲကွာ… ဘာဖြစ်လဲ… ဖြတ်တာပေါ့…"
ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် သူတို့ရွာကို အလည်သွားရာမှ အချိန်လွန်ပြီး အိမ်ပြန်ရန် အခက်တွေ့နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ မြို့ပြင် သင်းချိုင်းက နာမည်ကြီးသည်။ သုဘရာဇာတောင် ညဘက် အလောင်းချစရာရှိရင် နေ့လည်ကတည်း က ကျွင်းတူးထားပြီး ညနေကို ကိစ္စအပြီးဖြတ်ပြီး မြို့ထဲ ပြန်အိပ်သည်။ ညနေ မှောင်စပျိုးပြီဆိုတာနဲ့ သချိုင်းထဲတွင် ခွေးလေခွေးလွင့်များမှအပ ဘာမှ မရှိတော့…။
"ဟရောင်… ဒီလိုလုပ်… လမ်းတစ်လျှောက်လုံး.. ငါတို့ ဆိုင်ကယ်စီးရင်း.. စကားပြောသွားကြမယ်.. ဒီလိုဆို အဲ့ဒီသင်းချိုင်း ဘယ်လို ကျော်လို့ ကျော်သွားမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး.."
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား စကားတပြောပြောနဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးလာလိုက်ကြတာနဲ့…. ခရီး တစ်ဝက်ကျိုး ည၁၀း၀၀ ခွဲလောက်လဲ ရောက်ရော.. ဆိုင်ကယ် ရှေ့မီးက ဖြတ်ကနဲ ကျွမ်းသွားတယ်..
"မင်းက သရဲ ကြောက်ကြောက်နဲ့ လီဗာ အသားကုန် လွတ်ဆွဲတာကိုးဟ.."
"ဟရောင်… ဒီအကြောင်း မစပါနဲ့ဆို… ခွီးတဲ့မှ… မင်းမှာ ဓါတ်မီးပါတယ်မှတ်လား.. ငါ့ကို နောက်ကနေ မီးထိုးပေး.."
ဒီလိုနဲ့ ဖြစ်သလို ဆက်မောင်းလာလိုက်ကြတာ… ည (၁း၀၀) ရောက်လည်း ရောက်ရော.. မြို့ထိပ် က သင်းချိုင်းကုန်း နားကို ရောက်လာပါရော…
"ဟရောင်… အသားကုန်ဆွဲကွာ.. လမ်းက ဖြူးနေတာပဲကို…"
ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဟိုကောင် မြှောက်ပေးတဲ့အတိုင်း လီဗာကို မိုင်ကုန်ဆွဲပြီး သင်းချိုင်းကို အမြန်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်တယ်..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ..
"ဟရောင်ရေ.. သေရောဟ… ချိန်းဆက်ပြုတ်သွားတာကွ…"
"တောက်…. ဒီနေရာကို ကျော်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ ဒီနေရာ ရှေ့မှာ လာဖြစ်ရတယ်လို့…"
"ဟရောင်… ဒီအကြောင်းမပြောပါနဲ့ဆို… လာ ဆိုင်ကယ်ကို ဒီမှာ ဒေါက်ထောက်ခဲ့.. နောက်မှ ချိန်း ဆက်ပြန်လိုက်ရှာကြမယ်…"
နှစ်ယောက်သား ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဓါတ်မီးထွန်းပြီး ချိန်းဆက်လေးကို လိုက်ရှာနေလိုက်ကြတာ အချိန် ဘယ်လောက်တောင် တာသွားလိုက်လဲမသိဘူး… ဗြုန်းဆို…. ဓါတ်မီး ရောင်အောက်မှာ ခြေထောက်တစ်စုံ ပေါ်လာတယ်… နှစ်ယောက်သား အပေါ်ကို ဆက်မကြည့်ရဲသေးပဲ ကြောက်ရွံ့စွာ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်.. ပြီးမှ တံတွေးမျိုချလိုက်ပီး အပေါ်ကို ဆက် ကြည့်လိုက်တော့… အသက် ၇၀ အရွယ် အဘိုးကြီး တစ်ယောက်…
"သားတို့ အဘကို ကူညီပါအုံးကွယ်…"
"အဘလေ… အဘ မြေးလေးကို လာမြှပ်တာ…."
"ဒီလိုပါ မြေးတို့ရယ်.. အဘ မြေးလေးက မနေ့ကပဲ ၀မ်းလျှောပီး ဆုံးသွားတယ်ကွယ်.. အဲ့ဒါ မြှပ်ချင်လို့ ကူညီပါအုံးနော်…"
"အာ… အဘကလည်း… မြှပ်စရာရှိ.. နေ့လည်မြှပ်ပေါ့ဗျ… ဒါမှ မဟုတ် သုဘရာဇာ လက်အပ် လိုက်လေ…"
"အဘတို့က ဆင်းရဲပါတယ်ကွယ်… ရက်လည်ဆွမ်းတောင်မှ ခုထိ မကပ်ရသေးပါဘူး… အဘမှာ ဆွေမျိုးကလည်းမရှိ… ဒီမြေးလေး တစ်ယောက်တည်းရှိတာ…ခုတော့…ခုတော့…ကူညီပေးပါ သားတို့ရယ်.."
ကျွန်တော် ခဏမျှ စဉ်းစားလိုက်ပြီး
"ကဲ…ကဲ…. ပြီးရောဗျာ…. ဟရောင်ထ.. သွားမယ်…"
"အာ… ဖြစ်….ဖြစ်ပါ့မလားကွာ…. ငါ သင်းချိုင်းထဲမ၀င်ရဲဘူး…ပြီးတော့…ပြီးတော့.. အဲ့အဘက သရဲ ဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…"
"ခွီးတဲ့မှ သရဲဖြစ်နေမှတော့.. ငါတို့ကို လာပီး အကူအညီတောင်းပါ့မလား..ခြောက်လွှတ်လိုက်မှာပေါ့ ဟ… ပိုက်ဆံမရှိလို့ပါတဲ့ဆို… သနားပါတယ်ကွာ…ကူညီလိုက်တာပေါ့..ကုသိုလ်ရပါတယ်.."
နှစ်ယောက်သား အဘနောက်ကနေ ကုပ်ချောင်းချောင်းနဲ့ လိုက်ပါသွားကြတယ်….. သင်းချိုင်း တစ်နေရာ ရောက်တော့… တူးလက်စ တွင်းလေးတစ်ခုနဲ့ ပေါက်တူး တစ်ချောင်းကို တွေ့ရတယ်..
"ဒီနေရာပဲ သားတို့ရယ်.. အဘ ဆက်မတူးနိုင်တော့လို့…သားတို့ ဆက်တူးပေးပါအုံး…"
"အဘ မြေးအလောင်းက ဘယ်မှာလဲ…"
"ဟိုးး အုတ်ဂူပေါ်မှာ တင်ထားတယ်…"
ဖျာလိပ်နဲ့ ပတ်ထားတဲ့ ၅ ပေလောက်ရှည်တဲ့ အလောင်း တစ်လောင်းကို တွေ့လိုက်ရတယ်.. အလောင်းရဲ့ပုံစံကြည့်ရတာ အသက် ၇ နှစ် ၈ ပဲ ရှိအုံးမယ်လို့ ခန့်မှန်းရတယ်..
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကလှည့် တူးလိုက်ကြတာ ခဏကြာတော့ ကလေး တစ်ယောက် ကောင်းကောင်းမြှပ်လို့ရမယ့် ကြွင်းအနေအထေား ရောက်သွားပီ…
"တူးပေးပါအုံးကွယ်.. ကျယ်ကျယ်လေး… ငါ့မြေးလေး ကျပ်နေမှာစိုးလို့ပါ…"
ကျွန်တော်တို့လည်း နောက် ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာအောင် ဆက်တူးပေးလိုက်တယ်…
"ဒီလောက်ဆို ရပီလား အဘ…"
"အေး..ရပီ..မြေးတို့ရယ်..ကျေးဇူးပါပဲ…ဒီလောက်ဆို အဘတို့ မြေးအဘိုး နှစ်ယောက်အတွက် ဆန့်လောက်ပါတယ်..."
အဘက ဘာမှ ထပ်မပြောတော့ပဲ...
"အဘ မြေးကို တစ်ခါတည်း မြှပ်လိုက်တော့မယ်.. ခဏနော်.." ဆိုပြီး အုတ်ဂူပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ အလောင်းကို ပုခုံးပေါ်မှာ ထမ်းချလာတယ်..။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက်ရှေ့မှာ ချလိုက်တယ်..။
"သားတို့ တစ်ဖက်က ကိုင်ပေးပါလား.."
ကျွန်တော်တို့လည်း အလောင်းတစ်ဖက်ကနေကိုင်ပြီး ဆွဲမလိုက်တယ်..။ ပုပ်သိုးတဲ့ အညှီနံ့က နှာခေါင်းထဲကို အလုအယက်တိုးဝင်လာတယ်.. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ.. အလောင်းကို နှစ်ဖက်မတာ မညီတာ ကြောင့် ဖျာလိပ်က အဘဖက်ကို လျှောကြသွားတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တာက….. မျက်လုံးကြီး ပွင့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ပြူးကြည့်နေတဲ့ ကလေးအလောင်းးး
ကျွန်တော်လည်း ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ကလေးအလောင်းကို ကျွင်းထဲ ပစ်ချလိုက်တယ်..။
"ဟင်… မင်းတို့….မင်းတို့…ငါ့မြေးကို ဘာလုပ်တာလဲ…. ငါ့မြေးကို ဘာလို့ပစ်ချလိုက်တာလဲ…"
"ကျွန်တော်တို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး..ကလေးက မျက်လုံးမပိတ်ထားတော့..လန့်ပြီး…ပစ်…ပစ်…"
"အဟင့်…အဟင့်…. အဟင့်….." ဒီအချိန်မှာပဲ…. ကျွင်းထဲက အလောင်းကနေ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ငိုသံထွက်လာတယ်…။
"ဟင်….ငါ့မြေးလေးနာလို့ ငိုနေပီ… ငါ့မြေးလေး နာအောင် လုပ်တဲ့ကောင်တွေ… ငါနဲ့တွေ့မယ်… ငါနဲ့တွေ့မယ်…"
"အားးးး.. အမေရေ… ကယ်ပါအုံး…. သရဲဗျ… သရဲ…သရဲ…အဟီးးး …အဟီးး…"
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အိမ်ကို ဘယ်လိုပြန်ရောက်လာမှန်းမသိတော့ပါဘူး..။ ဆိုင်ကယ်မယူပဲ တောက်လျှောက်ကိုပြေးလာတာပါ..။ အိမ်ရောက်တော့ ဖိနပ်တွေလည်း ပါမလာတော့ဘူး.. ဟို ကောင်ဆို ဘောင်းဘီတိုလေးပဲ ပြန်ပါလာတော့တယ်…။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး တစ်ပတ်လောက် လိပ်ပြာလွင့်ပြီး ဖျားခဲ့ကြပါတယ်..။
ဒီဖြစ်ရပ်တွေ အပြီး ခြောက်လလောက် အကြာမှာ.. အသုဘပို့ရင်း သင်းချိုင်းကို နောက်တစ်ခေါက် ရောက်လာခဲ့ရပါတယ်..။ သင်းချိုင်းထဲဝင်ဝင်ချင်းပဲ ကြက်သီးတွေ ထသွားခဲ့ပြီး အားလုံးကိစ္စတွေ ပီးလို့ ကားပေါ် ပြန်တက်မယ့် အချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အတွေး တခု ၀င်လာပါတယ်..။ ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး..
"ခဏနော်… အပေါ့သွားချင်လို့…" လို့ပြောပြီး ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ နေရာကို သွားကြည့် မိပါတယ်..။ ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ရတာကတော့…. မြေပုံလေးနှစ်ခုကို ကပ်လျက်မြှပ်ထားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်…. မြေပုံလေးနှစ်ခုပေါ်မှာ ရေးထားတာကတော့…..
"ဦးဖိုးစိန် - အသက် (၇၂) - ၂၄-၆-၂၀၀၃
ကျော့ဖြူစင် - အသက် (၈) - ၂၄-၆-၂၀၀၃ "